महिला कलाकारलाई अपशब्द बोलेर आत्मरति लिँदारहेछन् - Baglungkhabar.com
महिला कलाकारलाई अपशब्द बोलेर आत्मरति लिँदारहेछन्
३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १७:४८
२० साउन, काठमाडौं । मलाई ‘कन्ट्रोभर्सी’ सित डर लाग्छ– अन्तरवार्ता सुरु हुनुअगाडि नायिका सञ्चिता लुईंटेलले ‘दुःख’ पोखिन् । सायद यही डरले गर्दा होला, उनले यो अन्तरवार्ताका लागि पनि निकै आनाकानी गरेकी थिइन् । केही विवादित विषयहरुमा प्रवेश नगर्ने पूर्वसहमतिपछि मात्रै हाम्रो यो संवाद अघि बढेको थियो ।
सञ्चिता मिडियामा कम आउँछिन् । अन्तरवार्ताबाट सकभर तर्किन्छिन् । बेडरुमदेखि बाथरुमसम्मका निजी कुराहरु यूट्यूवमा छरपष्ट पार्ने नायिकामा उनी पर्दिनन् । उनका नायक श्रीमान निखिल उप्रेतीलाई पनि जहाँसुकै अन्तरवार्ता दिन रोक्छिन् ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा चाहिँ सञ्चिताको ध्यान निकै गइरहेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक सक्रिय रहने उनी चर्चामा रहेका राजनीतिक, सामाजिकदेखि आध्यात्मिकसम्मका मुद्दाहरुलाई चासोपूर्वक पछ्याउने गर्छिन् ।
तर, आफ्ना व्यक्तिगत विचार सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरिहाल्न भने सक्दिनन् । किनकि उनलाई ‘कन्ट्रोभर्सी’ सित डर लाग्छ । त्यसैले फेसबुक–इन्स्टाग्राममा आफ्ना नयाँ–नयाँ फोटो अपलोड गरेरै सामाजिक सञ्जालको तिर्खा मेट्छिन् ।
केवल १७ वर्षको उमेरमा ‘अप्सरा’ चलचित्रबाट डेब्यू गर्दा सञ्चिता दुब्ली–पातली र टिठलाग्दी थिइन् । उनको निर्दोष अनुहार र शालीन अभिनयलाई दर्शकले रुचाए । फिल्म इन्डष्ट्रीमा स्थापित हुन उनलाई समय लागेन । उनले ‘कलिउडकी अप्सरा’ को संज्ञासमेत पाइन् ।
किशोरावस्थामै हतारिएर वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्दा उनको करिअरको रथ डग्मगायो । तर, ढलेन । सन्तानप्राप्तिपछि भने उनी आफैं फिल्मबाट केही समय टाढा भइन् । एक वर्षको अन्तरालमा जन्मेका छोरा र छोरीको हेरविचारमा नै केन्द्रित भइन् सञ्चिता । छोराछोरी हुर्काउने क्रममा आफ्नो शरीर ‘मेन्टेन’ गर्न पनि भ्याइनन् । अब चाहिँ उनी फेरि स्लिम बन्ने चक्करमा छिन् ।
शरीर मोटाए पनि सञ्चिताको सुन्दरतामा ह्रास आएको छैन । बरु कतिपयले उनलाई पहिलेको भन्दा राम्री देख्छन् ।
मैले पनि भनिदिएँ, ‘तपाईं त मोटाएर झन् राम्री हुनुभएछ ।’
उनी त खुशी हुनुको साटो खिस्रिक्क पो परिन् । खासमा उनलाई ‘मोटाएको’ भन्ने शब्द नै चित्तमा गढ्दो रहेछ ।
‘जसले भेट्दा पनि पहिलो प्रतिक्रिया उही हुन्छ : कस्तो मोटाएको ?’ उनले चित्तदुखाइ गरिन्, ‘अब दुब्लाएर देखाउँछु ।’
पछिल्लो एक महिनामा आफू डेढ किलोजति घटेको उनले सगर्व सुनाइन् । यद्यपि, फ्याङ्लो लुगा लगाएकी हुनाले उनको वास्तविक मोटोपनाबारे अनुमान गर्न मलाई कठिन भयो । फेरि, आज हाम्रो अन्तरवार्ताको मुल मुद्दा सञ्चिताको फिटनेस वा सुन्दरता थिएन । तसर्थ यो विषयलाई थाती राखेर म मुद्दामा प्रवेश गरेँ ।
अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विभिन्न खाले स्क्यान्डलहरु चलिरहेका छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो समय चर्चामा रहेको विषय चाहिँ चलचित्र क्षेत्रभित्रको लैंगिक भेदवाव र ‘ब्याड टच’ हो । नायिका साम्राज्ञी लक्ष्मीदेखि शाह र अभिनेता भुवन केसीबीचको यो विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।
यही विवादको सेरोफेरो र नेपाली चलचित्रमा महिला कलाकारका सुखदु:खबारे सञ्चितासँग मैले प्रश्नका गुजुल्टा फुकाएँ । गुजुल्टोबाट निकालेर उनलाई सोधिएको पहिलो प्रश्न थियो, के अहिले चर्चा भएजस्तो नेपाली चलचित्रमा महिला कलाकारलाई विभेद छ ?
अपेक्षित प्रश्न भएकाले सायद जवाफका लागि उनी पूर्णरुपमा तयार थिइन् । धाराप्रवाह दिन थालिन् ।
‘नेपाली समाजका हरेक क्षेत्रमा लैंगिक विभेदका अवशेषहरु छन् नै । समयक्रममा यो विभेद कम हुँदै त गएको छ, तर निमिट्यान्न भएको छैन । चलचित्र क्षेत्रको अवस्था पनि यही हो । फेरि, लैंगिक समानता भनेको रातारात हासिल हुने कुरा पनि होइन ।’
सञ्चिताले रोचक उदाहरण दिइन्, ‘जस्तो कि, हाम्रो शरीरमा दुईवटा हातलाई नै हामीले समान व्यवहार गर्दैनौं । कतिपय मानिसहरु केही चिज देब्रे हातले दिएको रुचाउँदैनन् नि । यो पनि एकप्रकारको रुढिवाद नै त हो । त्यस्तै रुढिवाद महिला–पुरुषलाई समाज र राज्यले गर्ने व्यवहारमा पनि छ ।’
‘त्यसो भए…’ पूरक प्रश्न तेर्स्याउन लाग्दा उनले रोकिन् । उनको जवाफ सकिएकै रहेनछ ।
‘तर, महिला र पुरुषलाई प्रकृतिले अलग–अलग विशेषता दिएको छ । त्यसअनुसार घर–परिवारमा कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन्छ । पुरुषले गर्ने काम महिलाले नसक्ने वा महिलाले गर्ने काम पुरुषले नसक्ने भएर होइन । कुन काममा कसको अभिरुचि र दक्षता बढी हुन्छ उसैले गर्ने हो । महिलासँग आमा बन्ने शक्ति हुन्छ, जुन पुरुषसँग हुँदैन । पुरुषले चाहेर पनि बच्चा जन्माउन सक्दैनन् ।’
‘सक्छन् त ?’ उनले मलाई नै सोधिन् ।
‘अहँ, कहाँ सक्नु,’ मैले सही थापेँ ।
‘अनि पुरुषले जस्तो महिलाले गर्न नसक्ने कामहरु पनि थुप्रै छन् । त्यसो भएकाले हामीले यो तथ्यलाई मनन गर्नुपर्छ कि न महिला मात्रैले सृष्टी चल्छ न पुरुष मात्रैले । सृष्टी त के कुरा, एउटा परिवार पनि राम्रोसँग चल्दैन ।’
यति भनेर सञ्चिता मौन भइन् ।
‘त्यसो भए…’ मैले अर्को प्रश्न सोध्न नपाउँदै फेरि बोल्न थालिन् ।
‘हरेक महिलाले आफूलाई शक्तिको प्रतीक मान्नुपर्छ । त्यस्तो आत्मविश्वास र गौरवपूर्ण सोच महिलाले राख्नुपर्छ । आफूलाई कमजोर किन सोच्ने ? कमजोर सोच्नु नै कमजोरी हो ।’
उनी फेरि रोकिइन् ।
‘अब म तपाईंको प्रश्नमा आउँछु ।’
उनको खास उत्तर त भर्खर पो सुरु हुँदै रहेछ ।
‘चलचित्र क्षेत्रमा विभेदको कुरा गर्दा तपाईंले आफूलाई कहाँ कसरी प्रिजेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यो सधैँ प्रकटरुपमा व्यक्त हुने कुरा पनि होइन । तपाईंले अरुको हाउभाउ र व्यवहारले विभेदको महसुस गर्नुभएको हुन्छ । मलाई लाग्छ, यदि तपाईंले कुनै बेला त्यस्तो महसुस गर्नुभयो भने तत्काल प्रतिवाद गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो हो । त्यो आत्मविश्वास कुनै पनि महिला कलाकारले राख्नुपर्छ । सायद यही आत्मविश्वासले गर्दा होला, मैले १८ वर्ष चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्दा कहिले पनि विभेदको सामना गर्नु परेन ।’
चलचित्र क्षेत्रमा पनि ब्याड टच भनेको ब्याड नै हुन्छ । त्यसलाई सहज मान्न सकिन्न । नयाँ नायिकाहरुलाई मेरो सुझाव के छ भने यस्ता कुराहरु उनीहरुले आफ्नो मनभित्रै गुम्स्याएर राख्नुहुन्न
यति बोलिसकेर सञ्चिताले लामो सास फेरिन् । पानी पिइन् । मुस्काउँदै उत्तर सकिएको जनाउ दिइन् । यतिञ्जेल टेबलमा दुई थान कफी खडा भइसकेका थिए । म चाहिँ करिब १५ मिनेटपछि दोस्रो प्रश्न राख्ने मौका मिलेकोमा हर्षित भएँ ।
‘फिल्म उद्योगमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ युवतीहरु सुरुमै कास्टिङ काउच (निर्माता–निर्देशकको शोषण) मा पर्ने गरेको चर्चा सुनिन्छ । तपाईंले त्यस्तो केही भोग्नु परेको थियो ?’
‘अहँ, ममाथि त्यस्तो केही भएन,’ उनले निर्धक्कसाथ भनिन् ।
यो जवाफको लामो ब्याख्या गर्लिन् भनेर मैले केहीबेर पर्खिँए । उनीचाहिँ अर्को प्रश्नको प्रतिक्षामा देखिइन् ।
‘सजिलै कसरी इन्ट्री पाउनुभयो त ?’ मैले नै सोधेँ ।
‘मलाई डा. भोला रिजालले ल्याउनुभएको हो । उहाँले सुरुमा ‘अप्सरा’का लागि अफर गर्दा मैले क्यामरा फेस कहिल्यै गरेको थिइनँ । कुनै प्रशिक्षण लिएको थिइनँ । मैले उहाँलाई यो कुरा भनेपछि उहाँले वीरेन्द्र हमालको क्लास लिन सुझाउनुभयो । मैले करिब ८–१० दिनको छाटो कोर्स गरेँ । बसन्त श्रेष्ठकहाँ नृत्य सिकेँ । त्यसपछि बल्ल फिल्ममा फाइनल भएको हुँ । त्यहाँ कास्टिङ काउचको कुनै गुञ्जायस नै थिएन ।’
महिला कलाकार भएको छाउँमा छाडा जोक्सहरु भन्ने वा अश्लिल शब्द प्रयोग गर्ने कुरालाई पनि यौन दुर्व्यवहारका रुपमा लिने गरिन्छ । यस्तो सञ्चिताले कति भोगिन् ?
‘यस्तो प्रवृत्ति चलचित्र क्षेत्रमा मात्र नभएर सबैतिर छ । जुनसुकै कार्यालयमा पनि महिला कर्मचारीले यस्तो खालको परिस्थिति सामना गरेका हुन सक्छन् । मेरो हकमा भन्नुपर्दाचाहिँ मेरो अगाडि कसैले यस्तो कुरा निकाल्न खोज्यो भने तुरुन्तै सचेत गराइहाल्छु । नसुनेझैं गर्ने वा हाँसेर टार्ने बानी मेरो छैन ।’
सञ्चिता सुरु–सुरुमा सुटिङमा जाँदा आफ्नी आमालाई साथ लैजान्थिन् । उनले निर्मातासँग गरेको सम्झौतामा नै एकजना सहयोगी सुटिङ स्पटमा ल्याउन सक्ने व्यहोरा उल्लेख थियो । अहिले पनि नयाँ नायिकालाई फिल्म खेलाउँदा यस्तो सुविधा दिइन्छ । उनीहरुले आफ्नो सहजताका लागि एकजना सहयोगी ल्याउन सक्छन् । तेस्रो फिल्मदेखि भने सञ्चिता एक्लै जान थालिन् ।
‘चलचित्रमा अभिनय गर्दा महिला कलाकारले भोग्नुपर्ने अन्य अप्ठेराहरु के–के हुन् ? के उनीहरुमाथि सुटिङ स्पटमै पनि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको गुञ्जायस रहन्छ ? ‘गुड टच’ र ‘ब्याड टच’ कसरी छुट्याउने ? तपाईंको आफ्नै भोगाइ र अनुभव कस्तो छ ?’
सञ्चितालाई भारी पुग्ने गरी मैले एकसाथ चार प्रश्न धकेलेँ । उनले अन्तिम प्रश्नबाट उत्तर दिन सुरु गरिन् ।
‘वास्तवमा भन्नुपर्दा मैलेचाहिँ त्यस्तो केही भोग्नुपरेको छैन । मैले जति पनि चलचित्रमा काम गरेँ, सबैमा पारिवारिक माहोल पाएँ । गलत मनसाय भएका मान्छे नै देखिनँ भन्ने त होइन । तर, ममाथि त्यस्तो गलत व्यवहारचाहिँ कसैले देखाएन ।
हाम्रो चलचित्र क्षेत्र सानो छ । त्यतिबिघ्न प्रोफेसनल पनि भइसकेका छैनौं । हामी निर्माता, निर्देशक र अन्य सहकर्मीलाई दाई, दिदी, अंकल, आन्टी जस्तो पारिवारिक साइनो लगाएर कुरा गर्छौंं । चलचित्रको सुटिङ स्पटमा ५०–६० देखि सय जनासम्म मान्छे हुन्छन् । एकप्रकारले हाम्रो घरभित्रकैजस्तो माहोल सुटिङमा हुन्छ । यस्तो माहोलमा सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको खासै गुञ्जायस हुन्न । सयमा एक–दुईजना गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरु छन् भने पनि उनीहरुलाई पन्छाउन सकिन्छ ।
मैले चलचित्रमा नायकले भन्दा बढी पारिश्रमिक लिएर पनि काम गरेको छु तर नायक आफूभन्दा धेरै जुनियर वा नयाँ भएको अवस्थामा मात्र
जहाँसम्म ‘गुड टच’ र ‘ब्याड टच’ को प्रश्न छ, योचाहिँ तपाईंले सहजै महसुस गर्न सक्ने कुरा हो । कसैले टच गर्नु नै समस्या होइन । निर्देशकले सिकाउने क्रममा, सहकलाकारले अभिनय गर्ने क्रममा टच नगरे त सुटिङ सम्भव नै हुँदैन । तर, कुनै टचले तपाईंलाई असहज अनुभव भएको छ भने तत्काल रियाक्ट गरिहाल्नुपर्छ, ताकि उक्त व्यक्तिको मनोबल नबढोस् । यदि तपाईंले रियाक्ट गर्नुभएन भने उसले त्यो व्यवहार दोहोर्याउँछ । अझै अघि बढ्न खोज्छ । तसर्थ रियाक्ट गर्नुपर्छ ।
तर, रियाक्ट गर्दा झन् नायिकालाई नै अप्ठेरो परिस्थिति पो आउँछ कि ?
हो, त्यस्तो लाग्न सक्छ । विशेषत नयाँ कलाकारहरुलाई यो अवस्थाको कसरी सामना गर्ने भन्ने अलमल हुन्छ । चलचित्र क्षेत्रमा यस्तै नै हो कि भन्ने पनि उनीहरुले सोच्लान् । तर, त्यसरी सोच्नु भएन । चलचित्र क्षेत्रमा पनि ब्याड टच भनेको ब्याड नै हुन्छ । त्यसलाई सहज मान्न सकिन्न ।
नयाँ नायिकाहरुलाई मेरो सुझाव के छ भने यस्ता कुराहरु उनीहरुले आफ्नो मनभित्रै गुम्स्याएर राख्नुहुन्न । चलचित्रमा सयौं जना हुन्छन्, उनीहरुमध्ये कोही न कोही त तपाईंका विश्वासिला होलान् नि । उनीहरुलाई आफ्ना कुरा सेयर गर्न सकिन्छ । त्यो पनि नसके घरमा गएर आफ्नो परिवारलाई सुनाउनुस । परिवारका सदस्यले दिने सुझावले तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ ।
फेरि पनि, मेरो पहिलो जोडचाहिँ ‘अन द स्पट रियाक्सन’ नै हो । यस्ता घटनामा आफूले चलचित्रबाटै हात धुनु पर्ला कि, करिअर बिग्रेला कि भनेर डराउने होइन । जोखिम मोलेर पनि प्रतिवाद गर्ने हो । गम्भिर खालको समस्या भोग्नुपर्यो भने करिअरलाई दाउमा लगाउन पनि तयार हुनुपर्छ ।
सुटिङ स्पटमा नायक र नायिकालाई गरिने व्यवहारमा फरकपना हुने गरेको कुरा आएको छ । यसमा पनि तपाईंको अनुभव बताइदिनुस् न ?
योचाहिँ तपाईं आफूमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो । चलचित्र क्षेत्रमा तपाईंले आफ्नो स्ट्याटस जस्तो बनाउनुभएको छ, त्यसको रिफ्लेक्सन हरेक ठाउँमा हुन्छ । सुटिङ स्पटमा पनि । त्यहाँ लैंगिक आधारमा भन्दा पनि तपाईंको स्टारडमको आधारमा मानसम्मान दिइन्छ ।
सुटिङ स्पटमा पुरुष कलाकारको तुलनामा महिला कलाकारले भोग्नुपर्ने अप्ठेराहरु त धेरै हुन्छन् नै । जस्तो कि आउटडोर सुटिङमा सबैभन्दा ठूलो समस्या ट्वाइलेटको हुन्छ । काठमाडौं बाहिर, दुरदराजमा सुटिङ गर्न जाँदा ट्वाइलेट कहाँ पाउने ? पुरुषहरुलाई यसले ठूलो समस्या नहोला, तर महिलाको लागि जटिल हुन्छ । हाम्रो देशमा अझै पनि धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा शौचालय अभावले खुल्ला स्थानमा दिसापिसाब गर्ने गरिन्छ । त्यहाँ सुटिङ गर्न जाँदा महिला कलाकारसँग पनि अरु विकल्प हुँदैन । यस्ता अप्ठेराहरु अरु पनि छन् ।
पारिश्रमिकको कुरामा पनि महिला र पुरुष कलाकारमा स्पष्ट अन्तराल छ । यो स्वभाविक हो कि लैंगिक विभेद नै हो ?
यो विषयमा हामीले पटक–पटक बोल्दै आएका छौं । यो पनि लैंगिक विभेद नै हो । यो यही समाजको प्रतिबिम्ब हो, जहाँ बराबरी श्रम गर्दा पनि पुरुषको तुलनामा महिलाले न्यून पारिश्रमिक पाउँछन् ।
मैले चलचित्रमा काम गर्दा नायकले भन्दा बढी पारिश्रमिक लिएर पनि काम गरेको छु । तर, नायक आफूभन्दा धेरै जुनियर वा नयाँ भएको अवस्थामा मात्र । यदि हिरो मेरै बराबरीको छ भने उसले मैलेभन्दा धेरै बढी पाउँछ । यो प्रथा अहिले पनि विद्यमान छ ।
चलचित्र क्षेत्रमा आवद्ध महिलाहरुलाई नेपाली समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि राम्रो छैन भन्ने गरिन्छ । तपाईंले चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
यो पनि तपाईं आफूमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो । तपाईं सही ठाउँमा हुनुपर्यो । त्यसो भयो भने अरुले कुरा काटेर केही नापिदैन । तपाईंको बोली–व्यवहारका आधारमा दर्शकले तपाईंलाई मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । मिडियाले त्यहीरुपमा तपाईंलाई प्रिजेन्ट गरिरहेका हुन्छन् । यसले तपाईंको एउटा छवि बनेको हुन्छ । समाजले पनि त्यही छविका आधारमा तपाईंलाई व्यवहार गर्छ । राम्रो छवि बनाउनुभएको छ भने राम्रो नजरले हेर्छ, खराब छवि छ भने खराब नजरले नै हेर्छ । तसर्थ आफू सही हुनुपर्यो ।
तपाईंले भनेजस्तो चलचित्रकर्मीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै राम्रो छैन भन्न मिल्दैन । कलाकारहरुले धेरै सम्मान र इज्जत पाउँछन् । म बाहिर सडकमा निस्केँ भने नचिनेका मान्छेहरु पनि ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ । बोल्न खोज्नुहुन्छ । सेल्फी खिच्न, अटोग्राफ माग्न आउनुहुन्छ । हामीलाई धेरै कार्यक्रमहरुमा निम्त्याइन्छ । हामीले लेखेका–बोलेका कुराहरु चासोपूर्वक सुनिन्छ । यो भनेको सम्मान हो । हाम्रो पेशाप्रतिको सम्मान । यसमा त मैले गर्व गर्न सक्छु नि । हामीले आफ्नो मर्यादामा बस्यौं भने समाजबाट पनि सकारात्मक व्यवहार पाउर्छौं । मेरो अनुभवले यही भन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी तुच्छ गाली खानेहरु पनि त कलाकारहरु नै छन् । अझ महिला कलाकारहरुमाथि त अत्यधिक अपशब्द प्रयोग भइरहेका हुन्छन् । यो प्रवृत्तिबाट तपाईं कति पीडित हुनुभएको छ ?
अवश्य पनि यो समस्या बढिरहेको छ । आजकाल धेरै व्यक्तिमा नकारात्मक सोच हावी हुँदै गएको देखिन्छ । सकारात्मकता त खोई कता हरायो । सुरु–सुरुमा यस्तो गालीहरु सुन्नुपर्दा मन रुन्थ्यो । तर, अहिले मैले यसलाई फरक तरिकाले लिने गरेको छु ।
म आजकाल सोच्छु कि जसले महिला कलाकारलाई अश्लिल गाली गरेर पुरुषार्थ गरेको ठान्छन्, उनीहरु सद्दे मानिस नै होइनन् । उनीहरु मानसिक रोगी हुन् । यस्ता मानिसहरुलाई महिला कलाकारलाई अश्लिल गाली गर्दा बडो रमाइलो लाग्दो रहेछ । मज्जा आउँदो रहेछ । यो एकप्रकारको कुन्ठा हो । मलाई यस्ता मानिसहरुप्रति रिस होइन, दया लाग्न थालेको छ ।
यदि तपाईं मानसिकरुपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ र तपाईंले राम्रो जीवन बाँचिरहनु भएको छ भने कहिले पनि अश्लिल गालीमा तपाईंको औँला चल्दैन । सामाजिक सञ्जालमा तपाईंले लेख्ने कुराहरुले तपाईंको सभ्यताको स्तर, शिक्षादीक्षा, घर–परिवारको संस्कार सबै देखाइरहेका हुन्छन् । समग्रमा तपाईंको औकात त्यहाँ देखिन्छ ।
पुरुष कलाकारको तुलनामा महिला कलाकारहरु बढी स्क्यान्डलमा मुछिने भएकाले पनि उनीहरु धेरै निशानामा परेका हुन् कि ?
अहँ, म त्यो मान्दिनँ । एउटै स्क्यान्डलमा पुरुष र महिला कलाकार मुछिएका छन् भने गाली जति महिला कलाकारलाई आउँछ । म तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । अस्ति भर्खर एकजना महिलाले मोटरसाइकलमा बस्दा ‘ब्याकलेस’ कपडा लगाएको फोटो भाइरल भयो । उहाँलाई गालीको वर्षा गरियो । तर, केही दिनअघि एक महिलामाथि एसिड आक्रमण भयो । त्यो चाहिँ किन भाइरल भएन ? ब्याकलेस ड्रेस लगाउने महिला गालीको हकदार थिइन् कि एसिड प्रहार गर्ने पुरुष ?
अर्को घटना पनि सुन्नुस् । एउटा बच्चा जंगलमा अलपत्र अवस्थामा भेटियो । त्यो फोटो सामाजिक सञ्जालमा आयो । सबैले पापिनी आमा भनेर बच्चाको आमालाई गाली दिन थाले । तर, बच्चाको बाबुको कुरा त कतै पनि आएन । के बाबुको चाहिँ जिम्मेवारी हुँदैन सन्तानप्रति ? त्यही बच्चालाई एक आमाले लगेर आश्रय दिनुभयो । उहाँको प्रशंसामा खोई सामाजिक सञ्जाल रंगिएको ?
यो सबै लैंगिक विभेदकै उपजहरु हुन् । यो समाज महिलाले सबै जिम्मेवारी निभाएको हेर्न चाहन्छ । तर, महिलाप्रतिको जिम्मेवारी निभाउनचाहिँ तयार हुँदैन । महिलाले सानो गल्तिमा पनि ठूलो सजाय भोग्नुपर्छ ।
मैले आफ्नो बच्चाको दुईवटा थर राखेकी छु । एउटा मेरो (लुईंटेल) र एउटा श्रीमानको (उप्रेती) । धेरैले सोध्ने गर्छन्, कहिलेसम्म हो दुईवटा थर ? नागरिकतामा निकाल्दा हेरौंला नि रे । यस्तो छ सोच । अनेक दुख झेलेर बच्चालाई जन्माउने, हुर्काउने आमा । तर, सन्तानलाई बाबुको सँगै आफ्नो थर दिन खोज्दा, अनेक प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्ने । अनि कति चित्त दुख्छ, भन्नु त ?
केही नायिकाहरुले सामाजिक सञ्जालमा अर्धनग्न र अन्तरंग तस्वीरहरु हाल्ने, सार्वजनिक कार्यक्रममा भड्किलो पहिरन लगाउने, उच्छृंखल हर्कत गर्ने गरेर आफैंले स्क्यान्डल सिर्जना गरिरहेको पनि पाइन्छ । त्यस्तो नगर्दा गालीगलौज कम हुन्थ्यो होला नि ?
यो सबै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । तपाईंले लगाउने, हिँड्ने, बोल्ने कुराहरुलाई कसैले ‘डिक्टेट’ गर्न मिल्दैन । हो, नायिकाहरु आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ । कतिपय नायिकाबाट बढी उछृंखलता प्रदर्शन भएको पनि होला । तर, एकाध खराब तत्वहरु त हरेक क्षेत्रमा भइ नै हाल्छन् । उनीहरुलाई हेरेर सिंगो चलचित्र क्षेत्रलाई मूल्यांकन गरिदिनु भएन । सबै नायिकाहरुलाई एउटै डालोमा हालिदिन भएन ।
नायिकाहरुले फिल्ममा वा फिल्मभन्दा बाहिर छोटा कपडा लगाउनुचाहिँ किन र कति आवश्यक हो ?
नायिका भन्नेवित्तिकै दर्शकमा एकखालको छवि हुन्छ । दर्शकले उनीहरुलाई फिल्मबाहिर पनि नायिकाकै रुपमा हेर्न चाहन्छन् । सिम्पल भएर हिँड्यो भने ‘यस्ता पनि हिरोइन’ भनेर हियाउने धेरै हुन्छन् । छोटा लुगा लगाएर हिँड्यो भने कुरा काट्ने धेरै हुन्छन् । हामीले यही बीचमा सन्तुलन बनाउने हो । ग्ल्यामरस देखिन छोटा लुगा लगाउनैपर्छ भन्ने हुँदैन । सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा म चाहिँ शिष्ट र मर्यादित पोशाक नै लगाउने गर्छु ।
जहाँसम्म चलचित्रभित्रको कुरा छ, हामीले आफ्नो सीमा आफैंले कायम गर्ने हो । चलचित्रको स्क्रिप्ट हेरेर मात्रै फिल्म साइन गर्नुपर्यो । नायिकाले कस्तो सिन दिनुपर्छ भन्ने पहिल्यै तय हुने कुरा हो । स्क्रिप्टमा भएको भन्दा बाहिर गएर अंगप्रदर्शन गराउन वा नराम्रो सिनहरु दिन कसैले वाध्य पार्नै सक्दैन । कथाले माग्यो भन्दैमा जे पनि हुँदैन ।
अन्त्यमा मैले भुवन–साम्राज्ञीको प्रसंग कोट्याएँ । यसमा चाहिँ उनी खुल्न चाहिनन् । मैले सोधेको थिएँ, ‘साम्राज्ञी र भुवनको स्क्यान्डललाई कसरी लिनुभएको छ ?’
‘यो विषय अदालतमा पुगेकाले म धेरै बोल्न चाहन्नँ । नेपाली चलचित्रमा उहाँहरु दुवैजनाको आ–आफ्नो स्थान छ । भुवन दाइ पुरानो र प्रतिष्ठित अभिनेता हुनुहुन्छ । साम्राज्ञी पनि अहिलेको पुस्ताकी अब्बल नायिका हुनुहुन्छ । उहाँहरु दुवैले सोचविचार गरेर कदम चाल्नुहोस् भन्ने हामी सबैले चाहेका छौं ।’
सञ्चिताले यो अदालतसम्म पुग्नुपर्ने विवाद नभएको बताइन् । तर, अदालतमा पुगिसकेपछि अब अरुले बोल्नु उपयुक्त नभएको उनको धारणा छ ।
‘साम्राज्ञीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, भुवन दाइले अर्को कुरा भन्नु भएको छ । वास्तविकता के हो भन्ने त अब अदालतले नै निर्क्यौल गर्ला । हामी तेस्रो व्यक्तिले के आधारमा कमेन्ट गर्ने ?’ उनले भनिन् ।
यद्यपि, अझै पनि दुईजना आपसी समझदारीमा आउनु नै उपयुक्त हुने धारणा सञ्चिताको छ । ‘मुद्दा–मामलाभन्दा पनि दुवैजना एक ठाउँमा बसेर समझदारीमा पुग्दा राम्रो हुने थियो । सायद सबै चलचित्रकर्मीले यही चाहनुभएको छ । यति सानो चलचित्र उद्योगमा धेरै स्क्यान्डल जन्माउनु र चर्काउनु राम्रो हुँदैन । यसले चलचित्र क्षेत्रलाई राम्रो गर्दैन । यसबाट भोलि आफ्ना सन्तानलाई चलचित्र क्षेत्रमा पठाउन धेरै बाबुआमा निरुत्साहित बन्न सक्छन् ।’
एक घन्टा लामो अन्तरवार्ता सकिएर उठ्दा उठ्दै सञ्चिताले भनिन्, ‘कन्ट्रोभर्सी चैं नआओस् है ।’